Turkiga oo ka hadlay Baasaboorka Somaliland, Eryidii Nile & Isbitaalka Deva - Caasimada Online
Home Warar Turkiga oo ka hadlay Baasaboorka Somaliland, Eryidii Nile & Isbitaalka Deva
Turkiga oo ka hadlay Baasaboorka Somaliland, Eryidii Nile & Isbitaalka Deva
Muqdisho (Caasimada Online)-Safiirka dowlada Turkiga u fadhiya magaalada Muqdisho oo shir jaraa’id ku qabtay xarunta safaarada ayaa ka hadlay arimo badan oo ay ugu horeeyaan isku daygii afgambi ee ka dhacay dalka Turkiga.
Safiirka Turkiga ee Soomaaliya Olgan Beker, ayaa uga mahadceliyay dowlada Soomaaliya qaabkii ay kaga fal celisay iskudagygii afgambi ee dhicisoobay iyo go’aanadii ay ka qaateen shirkada Nile Academy.
Safiirka ayaa sheegay in dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya ay ka shaqeynayaan sidii loosii wadi lahaa howlaha ay qaban jireen Nile Academy iyo isbitaalada ay ka fureen magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Dhinaca kale safiirka Turkiga ee Soomaaliya Mr Bekar ayaa ka hadlay aqoonsiga baasaboorka Somaliland oo maalmahaan la hadal hayay iyo wadahadalada u socdo dowlada Turkiga iyo maamulka Somaliland oo ku aadan in hayada Nile Academy laga eryaa deegaanada Somaliland.
Sidoo kale safiirka ayaa sheegay iney ka shaqeynayaan sidii dib waxbarashadooda ugu heli lahaayeen ardayii Soomaaliyeed ee kusugan dalka Turkiga ee laga eryay goobaha ay wax ka baranayeen.